Ukwephulwa Kokwethenjwa e-UAE: Ukukhwabanisa Nokwephulwa Kokuthenjwa kungamacala obugebengu e-UAE
Ukukhwabanisa nokwephulwa kokwethembeka kungamacala obugebengu e-UAE
Ukuphulwa Kokwethenjwa e-UAE
Ngaphandle kwezinzuzo ezinhle zebhizinisi, okuhlanganisa imali engenayo engenayo intela, indawo emaphakathi ye-United Arab Emirate (UAE) kanye nokuba seduze kwezimakethe zomhlaba ezinkulu kuyenza ibe indawo ekhangayo yohwebo lomhlaba. Isimo sezulu esifudumele saleli lizwe kanye nokukhula komnotho kwenza lihehe abokufika, ikakhulukazi abasebenzi abavela kwamanye amazwe. Empeleni, i-UAE iyizwe lamathuba.
Nokho, ukuhluka kwe-UAE njengendawo enamathuba amahle ebhizinisi kanye namazinga okuphila amahle kakhulu akuhehanga nje kuphela abantu abasebenza kanzima emhlabeni wonke kodwa nezigebengu. Kusukela kubasebenzi abangathembekile kuye kozakwethu bebhizinisi abangathembekile, abahlinzeki, nabanye ozakwethu, ukwephulwa kokwethembeka sekuyicala elivamile lobugebengu e-UAE.
Kuyini Ukuphulwa Kwethemba?
Ukukhwabanisa nokwephulwa kobugebengu bokwethenjwa kungamacala obugebengu e-UAE ngaphansi kwayo Federal Law No. 3 ka-1987 kanye nezichibiyelo zayo (Ikhodi Yezigwebo). Ngokwe-athikili 404 ye-UAE Penal Code, ukwephulwa komthetho we-trust kubandakanya namacala okuxhaphaza impahla egudlukayo, okuhlanganisa nemali.
Ngokuvamile, ukwephulwa kokwethembeka kobugebengu kubandakanya isimo lapho umuntu obekwe esikhundleni sokwethenjwa nomthwalo wemfanelo ethatha ithuba lesikhundla sakhe ukuze akhwabanise impahla kathishanhloko. Esimeni sebhizinisi, umenzi wobubi ngokuvamile uba isisebenzi, uzakwethu webhizinisi, noma umphakeli/umthengisi, kuyilapho isisulu (uthishanhloko) ngokuvamile engumnikazi webhizinisi, umqashi, noma uzakwethu webhizinisi.
Imithetho yenhlangano ye-UAE ivumela noma ubani, okuhlanganisa abaqashi nozakwethu bebhizinisi elihlanganyelwe abayizisulu zokuqolwa abasebenzi babo noma ozakwethu bebhizinisi, ukuthi bamangalele izephulamthetho ecaleni lobugebengu. Ukwengeza, umthetho uyabavumela ukuthi bathole isinxephezelo kulowo onecala ngokuqala ukuqulwa kwecala enkantolo yezakhamuzi.
Izidingo Zokwephulwa Kwecala Lobugebengu Lokuthenjwa
Noma umthetho uvumela abantu ukuthi bamangalele abanye ngokwephulwa kwamacala okuthenjwa, ukwephulwa kwecala lokuthenjwa kufanele kuhlangabezane nezimfuneko ezithile noma izimo, izici zobugebengu bokwephulwa kokwethembeka: okuhlanganisa:
Ukwephulwa kokwethembeka kungenzeka kuphela uma ukukhwabanisela kubandakanya impahla esusekayo, okuhlanganisa imali, amadokhumenti, namathuluzi ezezimali afana namasheya noma amabhondi.
Ukwephulwa kokwethenjwa kwenzeka lapho ummangalelwa engenalo ilungelo elingokomthetho mayelana nempahla asolwa ngokukhwabanisa noma ukuyisebenzisa budedengu. Empeleni, umenzi wobubi wayengenalo igunya elingokomthetho lokwenza ngendlela abenza ngayo.
Ngokungafani nokweba nokukhwabanisa, ukwephulwa kokwethembeka kudinga isisulu ukuba senze umonakalo.
Ukuze kwenzeke ukwephulwa kokwethembeka, ummangalelwa kufanele abe nempahla ngenye yalezi zindlela ezilandelayo: njengesivumelwano sokuqashisa, ukuthembela, ukuboleka imali, noma i-proxy.
Ebudlelwaneni babaninimasheya, umnikazi wamasheya owenqabela abanye abanikazimasheya ekusebenziseni amalungelo abo angokomthetho kumasheya abo futhi athathe lawo masheya ukuze bazuze angase ashushiswe ngokwephula ukwethenjwa.
Ukwephulwa kwesijeziso sokuthembela e-UAE
Ukuze kunqandwe abantu ekwenzeni ukwephulwa kwamacala okuthenjwa, umthetho wenhlangano ye-UAE wenza kube yicala ukwephulwa kokwethembeka ngaphansi kwe-Athikili 404 Yekhodi Yenhlawulo. Ngakho-ke, ukwephulwa kokwethembeka kuyicala elingalungile, futhi noma ubani otholakala enecala ungaphansi koku:
Isigwebo sejele (ukuvalelwa), noma
Kodwa-ke, inkantolo inegunya lokunquma ubude bokuboshwa noma inani lenhlawulo kodwa ngokuvumelana nezinhlinzeko zeKhodi Yezigwebo. Nakuba izinkantolo zinenkululeko yokukhipha noma iyiphi inhlawulo kuye ngokuthi icala lingakanani, i-athikili engu-71 ye-Federal Penal Code No.
Ukuphulwa Komthetho Wokuthenjwa kwe-UAE: Izinguquko Zezobuchwepheshe
Ngokufanayo nezinye izindawo, ubuchwepheshe obusha buye bashintsha indlela i-UAE eshushisa ngayo ukwephulwa kwamacala okuthembana. Isibonelo, ezimeni lapho umenzi wecala asebenzise ikhompuyutha noma isisetshenziswa sikagesi ukwenza ubugebengu, inkantolo ingabashushisa ngaphansi kwe-UAE Cyber ​​Crime Law (Federal Law No. 5 of 2012).
Ukwephulwa kwamacala okuthenjwa ngaphansi koMthetho Wobugebengu Be-Cyber ​​​​kunenhlawulo eqinile kunalawo ashushiswa ngaphansi kwezinhlinzeko zeKhodi Yezigwebo. Amacala angaphansi koMthetho Wobugebengu Be-Cyber ​​​​afaka lawo abandakanya:
Ukwenza idokhumenti usebenzisa izindlela zikagesi/zobuchwepheshe
Ukusebenzisa ngenhloso idokhumenti ye-elekthronikhi engumgunyathi
Ukusebenzisa izindlela zikagesi/zobuchwepheshe ukuthola impahla ngokungemthetho
Ukufinyelela okungekho emthethweni kuma-akhawunti asebhange ngezindlela zikagesi/zobuchwepheshe
Ukufinyelela okungagunyaziwe kwesistimu kagesi/yezobuchwepheshe, ikakhulukazi emsebenzini
Isimo esivamile sokwephulwa kokwethembeka ngobuchwepheshe e-UAE sihlanganisa ukufinyelela okungagunyaziwe kwezibalo zabantu noma zenhlangano noma imininingwane yasebhange ukuze kudluliselwe imali ngokukhwabanisa noma ukuntshontsha kubo.
I-UAE iyizwe lamathuba abantu abaningi, kuhlanganise nezigebengu. Nakuba isikhundla sezwe esiyingqayizivele senza ukwephulwa kwamacala okwethembeka kuvame, Ikhodi Yengwebo ye-UAE kanye nezinye izinhlinzeko ezimbalwa zeMithetho Yombuso zisebenze ngempumelelo ekubhekaneni nalawa macala. Kodwa-ke, njengesisulu noma ummangalelwa osolwa ngokwephula icala, udinga ummeli wokuvikela ubugebengu onekhono ukuze akusize ubhekane nenqubo yezomthetho evame ukuba yinkimbinkimbi.
Qasha Umeluleki Wezomthetho Onolwazi Nochwepheshe eDubai
Uma usola ukuthi ukwephulwa kokwethembeka kwenzeke, kungcono kakhulu ukufuna iseluleko ku-a ummeli wobugebengu e-UAE. Singezinye zezinkampani ezihola phambili zabameli bobugebengu e-UAE ezibhekene nokwephulwa komthetho wokwethembeka.
Uma uqasha inkampani yethu yabameli ukuthi ikumelele ekwephuleni icala le-trust, sizoqinisekisa ukuthi inkantolo iyalilalela icala lakho nokuthi amalungelo akho avikelekile. Ummeli wethu Wokwephulwa Kwethemba eDubai, e-UAE uzokunikeza lonke usizo oludingayo. Siyaqonda ukuthi udaba lwakho lubaluleke kangakanani kuwe, futhi senza konke okusemandleni ukuvikela amalungelo nezintshisekelo zakho. Xhumana nathi namuhla!
Sishayele manje ukuze uthole isikhathi sokuqokwa nokubonisana nabameli bethu abakhethekile bezohwebo/zebhizinisi kanye nabameli bobugebengu ku- +971506531334 +971558018669